Oziọma nke ụbọchị Jenụwarị 21, 2021 na nkọwa nke Pope Francis | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oziọma nke Jenụwarị 21, 2021 na nkọwa nke Pope Francis
Hib 7,25 - 8,6
Umu nnem, Kraist puru izoputa ndi na-abiaru Chineke nso site na ya: N’ezie, o di ndu mgbe nile n’iru aririo n’aha ha.
Nke a bụ nnukwu onye nchụàjà anyị chọrọ: onye dị nsọ, onye aka ya dị ọcha, onye na-enweghị ntụpọ, onye e kewapụrụ na ndị mmehie ma bulie ya elu karịa eluigwe. Ọ dịghị mkpa, dị ka nnukwu ndị nchụàjà, ịchụ àjà kwa ụbọchị, nke mbụ maka mmehie nke aka ya nakwa maka nke ndị mmadụ: o mere ya otu ugboro, na-achụrụ onwe ya. N'ihi na Iwu ahu bu ndi-isi-nchu-àjà ndi adighi-ike; ma okwu iyi ahụ, nke sochiri Iwu ahụ, na-eme Ọkpara ahụ onye nchụaja, nke e mere ka ọ zuo oke ruo mgbe ebighị ebi.
Isi okwu nke ihe ndị a anyị na-ekwu bụ nke a: anyị nwere nnukwu onye isi nchụaja dị otu a, onye nọdụrụ ala n'aka nri nke ocheeze nke onye dị ukwuu n'eluigwe, onye na-eje ozi nke ebe nsọ na nke ezi ụlọikwuu, nke Onyenwe anyị, na ọ bụghị mmadụ wuru.
N’ezie, a na-aha onye isi nchụ aja ọ bụla inye onyinye na aja: yabụ na ọ dịkwa Jizọs mkpa inwe ihe ọ ga-eweta. A sị na ọ nọ n’ụwa, ọ garaghị abụ ụkọchukwu, ebe ọ bụ na e nwere ndị na-enye onyinye dịka Iwu ahụ kwuru. Ndị a na-enye òtù nzuzo nke bụ onyinyo na onyinyo nke ihe ndị dị n'eluigwe, dị ka Chineke kwupụtara nye Moses, mgbe ọ na-achọ iwu ụlọikwuu ahụ: "Lee - o kwuru - ime ihe niile dị ka ihe atụ ahụ emere gi n'elu ugwu ".
Otú ọ dị, ugbu a, o nweela ozi nke kachasị mma karịa ọgbụgba ndụ ahụ ọ na-agbatị, n'ihi na ọ na-adabere na nkwa ndị ka mma.
Mkp 3,7: 12-XNUMX
N'oge ahụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya pụrụ gawa n'oké osimiri, nnukwu ìgwè mmadụ si Galili sooro ya. Site na Judia na Jerusalem, site Idumea na n'ofè Jọdan, site kwa na Taia na Saidon, oké ìgwè madu, nke nuru ihe Ọ n doingme, biakute Ya.
Mgbe ahụ ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwadebeere ya ụgbọ mmiri, n'ihi igwe mmadụ ahụ, ka ha wee ghara ịzọpịa ya. N'ezie, ọ gwọọla ọtụtụ ndị, nke mere na ndị nwere ụfọdụ ihe ọjọọ tụkwasịrị ya iji metụ ya aka.
Ndi mmuo ojoo ahu, mgbe ha huru ya, dara nukwu ya wee tie mkpu, si: Gi bu Okpara Chineke! Ma o nyesiri ha iwu ike ka ha ghara ikpughe onye ọ bụ.
Ndị mmadụ na-achọ Ya: ndị mmadụ legidere Ya anya na Ya anya ya lekwasịrịkwa ndị mmadụ. Ma nke a bụ ihe pụrụ iche nke anya Jizọs na-ahụ: Jizọs anaghị eme ka ndị mmadụ mara: Jizọs na-ele mmadụ niile anya. Lelee anyị niile anya, ma lee onye ọ bụla n’ime anyị. Lelee nnukwu nsogbu anyị ma ọ bụ nnukwu ọ ourụ anyị, ma leleekwa obere ihe gbasara anyị. N'ihi na ọ dị nso. Ma anyị anaghị atụ egwu! Anyi n’agbaghari n’uzo a, ma na-ele Jesu anya mgbe nile, ma anyi n’enwe ihe ijuanya a: Jesu n’onwe ya lekwasiri m anya. (Santa Marta - Jenụwarị 31, 2017)